९१ वर्षको उमेरमा डिग्री हासिल ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एजेन्सी ।पढनलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने कुरा थाइल्यान्डकी किमलान जिनाकुले पुष्टी गरेकी छिन । उनल्े ९१ वर्षको उमेरमा स्नातक पढाइ पूरा गरेकी छिन्। उत्तरी थाइल्यान्डको लेन्पेंग प्रान्तको सबैभन्दा राम्रो स्कुलमा पढेकी किमलान आफ्नो स्कुलमा एक प्रतिभाशाली छात्राका रूपमा चिनिन्थीन । तर उनले थप पढाइका लागि विश्वविद्यालय जान सकिनन् । उनको परिवार बैंककमा बस्न आएपनि उनको पढ्ने धोको अपुरै रह्यो । बैंकक आए लगत्तै परिवारले बिहे गरिदिएपछि उनले पढ्ने सपना त्याग्नु परेको थियो ।
तर, भर्ना भएको केही समयपछि उनकी एक छोरीको मृत्यु भयो। छोरीको वियोगमा शोकमा डुबेकी उनको फेरी पढ्ने सपना टाढा भयो । विस्तारै दुस्ख बाट तंग्रिदै उनले फेरी विश्वविद्यालय भर्ना हुने साहस बटुलिन् र ८५ वर्षको उमेरमा ह्युमन इकोलोजी विषयमा भर्ना भइन् । किमलानले भनिन्– ‘जबमा दुःखबाट बाहिर आएँ, मैले आफूलाई उक्त विषय पूरा गर्ने दबाब दिएँ। म आशा गर्छु मेरी छोरीको आत्मा यो देखेर खुसी हुनेछ।’ उनी आफ्ना बच्चाहरूको अनुभवबाट प्रेरित भएर युनिभर्सिटीमा भर्ना भएको बताउँछिन्।
यी हुन् धर्मको नाममा जनता ठग्ने नक्कली बाबाहरु(भिडियो सहित)
भदौं २६,एजेन्सी। भारतीय अखडा परिषद्ले धर्मको नाममा जनता ठग्नेहरूको सूची सार्वजनिक भएको छ । यो सूचीमा धेरैजसो […]
एजेन्सी - एउटा मानिसले कतिवटा सम्म विवाह गर्न सक्छ ? हामिले अनुमान लगाउने एक दुर्व वा तीन सम्म हो । तर एक […]